Adeegyada Ardayda - Dugsiyada Aagga Robbinsdale
Adeegyada Ardaydu waxay ka kooban yihiin koox xirfadlayaal heer sare ah, daryeel-yaqaanno u heellan inay horumariyaan ku-guuleysiga ardayga iyagoo kor u qaadaya khibradaha waxbarasho ee dhammaan. Balanteenu waa inaan la shaqeyno ardayda, waalidkood, iskuulada, iyo hay'adaha bulshada si looga caawiyo xaaladaha kala duwan. Shaqaalaheennu way dhageysan doonaan, hagi doonaan, wax bari doonaan, oo taageeri doonaan ardayda si ay u helaan natiijooyin guul leh oo xagga dugsiga iyo nolosha ah.
Daryeelka iyo Daaweynta
Hoylaawe iyo Foster
Adeegyada Waxbarista ee Guriga-Baxsan
Intermediate District 287 waa bahwadaag waxbarashadeed oo diirada saaraya xalalka 11 xubnood oo degmo dugsiyeed ah, oo ay kujiraan Dugsiyada Deegaanka Robbinsdale. Degmada 287 waxay u fidisaa adeegyo ardayda loogu adeegayo cisbitaalka, daaweynta maalinlaha ah iyo barnaamijyada deganaanshaha, iyo waliba dhalinyarada la xukumay. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo boggooda .
Sharciga McKinney-Vento wuxuu ardayda hoylaaweyaasha ah iyo kuwa aadka u dhaqaaqa siiya xuquuqaha qaarkood si ay u helaan fursado ka caawinaya inay la kulmaan isla heerarka tacliinta sare ee laga filayo dhammaan ardayda degmadeena.
Ardayda hoylaawayaasha ah waxay ku nool yihiin mid ka mid ah xaaladaha hoos ku taxan:
Carruurta iyo dhalinyarada wadaagaya guryaha kuwa kale
Carruurta iyo dhallinta ku nool hudheellada, hudheelada, jardiinooyinka jilaaga ah ama xeryaha lagu seexdo iyada oo ay ugu wacan tahay la'aanta hoy ku habboon oo kale
Ku noolaanshaha hooyga xaaladaha degdegga ah ama ku meel gaarka ah
Looga tagay cisbitaalada
Sugitaanka meelaynta xannaanada
Ku noolaanshaha meel dadweyne ama meel gaar loo leeyahay oo aan loogu talagalin bini-aadamka inuu ku noolaado
Ku noolaanshaha baabuurta, jardiinooyinka, dhismayaasha laga tegey, guryaha liita, basaska ama tareennada, iwm.
Carruurta haajirtay ee ku nool mid ka mid ah xaaladaha kor ku xusan
Marka loo eego Sharciga McKinney-Vento, carruurta ku jirta xaaladaha guri la'aanta waxay xaq u leeyihiin:
Aad iskuulka, ayada oo aan loo eegin meesha ay ku nool yihiin ama inta ay ku noolaayeen
Ka qaybgal dugsiga deegaanka ama dugsiga asalka ah, haddii tani ay dantoodu ku jirto; dugsiga asalkiisu yahay dugsiga uu canuggu dhigto markii ay si joogto ah u hoyga u ahayd ama dugsiga uu ilmuhu markii ugu dambaysay ka diiwaangashan yahay
Hesho gaadiid kusocda ama kasooqaada iskuulka asalka ah
Isku qor dugsiga markiiba
Si buuxda uga qaybqaado nashaadaadka dugsiga
Helitaanka barnaamijyo iyo adeegyo isku mid ah oo ay heli karaan dhammaan ardayda kale, oo ay ku jiraan gaadiidka iyo adeegyada waxbarashada ee dheeriga ah
Hoyga Degmada Hennepin
Ururka Qaranka ee Waxbarashada Carruurta Guri la'aanta ah iyo Dhallinyarada
Xarunta Qaranka ee Waxbarashada Hoyga
Ardayda waxaa laga filayaa inay kaqeyb galaan iskuulka sida ugufiican ee macquul ah, laakiin waxbarida dib u celinta guriga ayaa la bixin karaa marka xaalad caafimaad ay ka hor istaagto inay kaqeybqaataan casharka fasalka maxaa yeelay waxay ku egyihiin gurigooda ama xarun daryeel caafimaad. Ujeedada koowaad ee waxbarista guri-ku-dirirka waa in ardayda loo oggolaado inay sii wataan barnaamijkooda waxbarasho markay awoodi waayaan inay dugsiga aadaan. Waxbariddu waxaa loogu talagalay in lagu daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee ardayga iyo, markii ay suurtagal tahay, waxaa lala jaan qaadayaa dugsiga ardayga si loo hubiyo in si habsami leh loogu soo noqdo dugsiga.
Marka Loo Baahan Yahay Tilmaamaha Dib-u-soo-celinta Guryaha (MN Rule 3525.2325)
Degmadu xarunta ay ku taallo waa inay siisaa waxbarasho joogto ah, waxbarasho gaar ah, ama labadaba, ardayga ama ardayga waxbarashada caadiga ah ee xanaanada illaa fasalka 12 ee la dhigo xarun ama guriga ardayga. Adeegyada waxbarashadda waa in la siiyaa ardayga ama ardayga caadiga ah ee waxbarashada:
Waxaa laga reebay ka qeyb galka sariirta caadiga ee ardayga 15 maalmood oo xiriir ah; ama
Waxaa loo saadaaliyay inuu ka maqnaan doono goobta dugsiga caadiga ah 15 xog ah oo isku xigta sida uu qabo maamulka meeleynta; sida dhakhtar caafimaad, cilmi nafsi, cilmu-nafsi, garsoore ama hay'ad kale oo maxkamaddu magacowday; ama
Caafimaadka naafada ka ah oo u baahan waxbarasho gaar ah oo ay kooxdu saadaalisay inay ka maqnaan doonaan goobta dugsiga caadiga ah illaa 15 maalmood oo dugsi oo is-dhaaf ah.
Haddii ardaygu uusan awoodin inuu xaadiro fasallada caadiga ah ee dugsiga caadiga ah dartiis xannuun, dhaawac ama meelayn nooc ka mid ah goobaha daaweynta, ardayga, sida lagu qeexay shuruudaha ka bixitaanka guriga, waxaa lagu qeexi karaa inuu yahay arday dibedda uga baxa. Si loo hubiyo in ardaygu sii wado horumarka waxbarashada ee manhajkooda shaqsiyeed, macallin shatiyeysan ayaa bixiya waxbarista ku-soo-celinta guriga sida ugu dhakhsaha badan ee suurtagalka ah xaaladaha daaweynta ee ardayga.
Ugudbinta waxbarida guriga dibedda ah waa in ay ansixiyaan Adeegyada Ardayda iyo ardayda naafada ah, Qorshaha Waxbarashada Shakhsiyeed (IEP) waa in wax laga beddelaa si loo daboolo baahida waxbarasho ee kumeelgaarka ah ee ardayga.
Haddii aad dareento in ardaygaagu uu baahi u qabo waxbarista guriga looga baxo, fadlan la xiriir maamulaha ama la-taliyaha dugsiga ardaygaaga.